Tag: app iphone | Martech Zone
LIID: Cilmiga CRM Ka soo galka SmartPhone-kaaga
Talaado, Oktoobar 27, 2015 Talaado, Oktoobar 27, 2015 Douglas Karr
Reps iibka ayaa caan ku ah in aan lagu darin waxqabadyada shirkadda CRM. Heerka jarista waxqabadka wuxuu noqon karaa mid hooseeya ilaa 20%, taasoo horseedi karta saadaalinta iibka ee la sameeyay iyadoo ku saleysan xogtaas laga joojinayo 80%. LIID waxay dhibaatadan kula tacaashaa taleefan casri ah oo siiya reps gelitaanka xogta otomaatiga ah iyo aalado si ay nolosha ugu fududaato sida iskaanka kaararka ganacsiga iyo qoraallada hadalka-qoraalka ah. Barnaamijka moobiilka ee LIID wuxuu kaloo u shaqeeyaa sidii caawiye iibka dalwaddii ah, isagoo xusuusinaya reps
Barnaamijyada Rasmiga ah ee Google Analytics ee loogu talagalay iPhone iyo Android
Jimco, Juun 18, 2014 Jimco, Juun 18, 2014 Douglas Karr
Rasmiga rasmiga ah ee Google Analytics iPhone iyo Google Analytics barnaamijyada moobiilka ee Google ayaa la siidaayay si aad uga heli karto dhammaan xogtaada Google Analytics webka iyo xogta barnaamijka iphone-kaaga. Xitaa barnaamijka waxaa ku jira warbixinnada Real Time. Abku wuxuu wanaajiyaa qaabeynta iyo xakamaynta warbixinta Google Analytics ee deegaanka moobiilka, markaa waxaad helaysaa waayo-aragnimada ugu fiican iyadoon loo eegin aaladda aad isticmaasho. Tusaale ahaan, abku wuxuu si otomaatig ah u hagaajiyaa shaashadda si uu ugu habboonaado shaashaddaada
Codsiga Mobilada Suuqgeynta Ugu Fiican! Qaybta 3
Kooxda cajiibka ah ee Postano ayaa markale sameysay, kana sare martay dhamaan filashooyinkii aan ka qabay codsi weyn oo moobiil ah oo wata nooca 3-aad ee Martech. Waxaan aaminsanahay inay tahay barnaamijka ugu wanaagsan ee Suuqgeynta iPhone-ka ah ee halkaa ku jira (Android soo socda)! Marka hore waa dib-u-habeyn aad u jilicsan oo isku dhafan oo ah Facebook-u eg bidix bidix. Waxay sahlaysaa inaad rogto oo aad doorato qaybta ama warbaahinta aad jeceshahay inaad ku dhex wareegto - oo ay ku jiraan Podcasts-keena, Fiidiyowyada iyo Dhacdooyinka - halka
Ugu diyaarso barnaamij moobil adag oo loogu talagalay iPhone iyo Android 5 Talaabo
Thursday, April 25, 2013 Talaado, Janaayo 12, 2021 Douglas Karr
Taageerayaashayda moobiillada waxay bixiyaan barnaamijyo mobilada la awoodi karo iyo websaydhyo moobil ah oo loogu talogalay shakhsiga, aan macaash doonka ahayn iyo bey'adda ganacsiga yar yar iyada oo la adeegsanayo warshadayntooda hoggaamiyaha barnaamij sameeyaha ah ee Do-It-Yourself (DIY) In ka badan 40 astaamood oo hodan ah oo loogu talagalay ka faa'iideysiga moobiilka, goobta iyo warbaahinta bulshada, waxay noqon karaan barnaamijka ugu qiimaha jaban uguna awoodda badan suuqa. Codsiga waa mid fudud, oo siinaya saaxir talaabo-tallaabo ah inuu kugu jiito adoo dejinaya barnaamijkaaga moobiilka. Tallaabada 1: Xullo kanaga
App Press: Naqshadeeyaha App-ka Mobilada ee Naqshadayaasha
Axad, Janaayo 27, 2013 Khamiis, Juun 18, 2015 Douglas Karr
App Press waxaa loo sameeyay si loo yareeyo farqiga aqoonta ee u dhexeeya naqshadeeyayaasha garaafyada iyo horumariyeyaasha. Naqshadeeye ahaan, aasaasihii Grant Glas wuxuu rabay inuu dhisto koodhadh bilaash ah. Soo-saare ahaan, Kevin Smith ayaa qoray xalka. Waxay abuureen 32 barnaamij oo adeegsanaya nooc hore oo App Press ah iyo tan iyo markii la bilaabay, 3,000+ isticmaaleyaal ayaa barnaamijyo ku abuuray barnaamijkooda. App Press waxaa loo sameeyay si ay ugu ekaato Photoshop oo ay ugu shaqeyso sida Muhiimka ah. Tani waxay u oggolaaneysaa naqshadeeye kasta inuu boodo